Jaajuuskii Mareykanka ahaa ee bixiyay sirta nuclear-ka ee waliba baxsaday - BBC News Somali
29 Agoosto 2019
Lahaanshaha sawirka Los Alamos National Laboratory Handout
Image caption Theodore Hall wuxuu ahaa seynisyahankii ugu da'da yaraa ee ka qeyb galay mashruucii lagu sameeyay bamkii ugu horreeyay ee atomic-ga adduunka
29-kii bishii Agoosto ee sanadkii 1949-kii, Ruushka wuxuu noqday "waddankii labaad ee heysta hubka nuclear-ka", xilligaas oo uu midowgii soviet qarxiyay bambadii ugu horreysay uu ku tijaabinayay hubkiisa nuclear-ka.
Tijaabadaas ayaa lama filaan ku noqotay waddamada reer galbeedka - sida ku xusan xog ay hayaan CIA-da Mareykanka.
Wasiirka Gaashaandhiga UK oo xilka looga qaaday sir uu dusiyay
Image caption Soviet-ka waxay bambadii ugu horreysay ee nuclear ah ku qarxiyeen fagaare hubka lagu tijaabiyo oo ku yaalla dalka Kazakhstan
Wax si iskiis ah u dhacay ma ahayn in Bambadii nuclear-ka ee ay Ruushka tijaabiyeen ay noqotay mid leh awoodda ay lahayd bambadii lagu magacaabay 'ninka buuran' ee uu Mareykanka ku qarxiyay magaalada Nagasaki ee dalka Japan, taariikhdu markii ay ahayd 9-kii bishii Agoosto ee sanadkii 1945-kii.
Mashruucaas wuxuu ahaa mid sirtiisu ay aad u culus tahay. Sida laga soo xigtay warbixin uu sanadkii 1945-kii daabacay wargeyska Life magazine, "rag aad u tiro yar oo tobannaan ruux ah ayaa ogaa micnaha mashruucaas uu ku saabsan yahay".
Image caption Moscow waxay xadday macluumaad ku saabsan bambadii loo yaqaannay "ninka buuran" ee uu mareykanka sanadkii 1945-kii ku qarxiyay magaalada Nagasaki ee dalka Japan
Isagoo aad u da' yar, oo 16 jir ah ayuu boos ka helay Harvard, wuxuuna ka qalin jabiyay sanadkii 1944-kii.
Hase yeeshee, arrinta aysan saraakiisha Mareykanku ka war qabin waxay ahayd in seynisyahankan da'da yar ay horayba u shaqaaleysiisteen qolyo kale.
Image caption Theodore Hall wuxuu sheegay inuu ka baqayay in Mareykanku kaligiis uu heysto nuclear
Bishii Disember ee sanadkii 1944-kii, seynisyahanka da'da yar ee reer Mareykan, Hall, oo garab ka helaya saaxiibkii ay horay qolka iskula dagganaan jireen ayaa gudbiyay wax loo aqoonsaday sirtii ugu horreysay ee nuclear-ka ee laga bixiyay xaruntii ku taallay magaalada Los Alamos.
Waxa uu markaas bixiyay wuxuu ahaa horumar laga gaaray habka loo farsameynayo hubkaas sida ba'an wax u gumaada.
"Intii lagu guda jiray sanadkii 1944-kii, waxaan ka walwalay khatarta ka dhalan karta in Mareykanku uu noqdo waddanka kaliya ee heysta nuclear, iyo waxa ay Washington sameyn karto haddii uu qalalaase dhici lahaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka", Theodore Hall ayaa sidaas ku yiri maqaal uu daabacay wargeyska New York Times, sanadkii 1997-kii, xilligaas oo ahayd 2 sano ka hor intii uusan u dhimanin cudurka Kansarka.
'Ninka da'da yar'
"Midowgii Soviet xilligaas ma ahayn cadow, balse wuxuu xulafo la ahaa Mareykanka", ayuu yiri Hall, wuxuuna intaas ku daray: "Dadkii ka socday Soviet-ka waxay si geesinimo leh ula dagaallameen maamulkii Naaziga, khasaare nafeed oo aad u weyn ayaana kasoo gaaray, geesinimadii ay sameeyeenna waxaaba suurtagal ah inay guul darro ka badbaadisay reer galbeedka".
Image caption Mashruucii lagu sameeyay hubkii ugu horreeyay ee nuclear-ka ayaa sirtiisa aad loo ilaalin jiray
Hall waxay Soviet-kii Ruushka u yaqaanneen "Ninka da'da yar", wuxuuna macluumaad kale oo dheeraad ah kasiin jiray tiknoolojiyad kasta oo laga gaaro farsamada nuclear-ka, gaar ahaan hubka ay ku jirto maaddada khatarta badan dhalisa ee loo yaqaanno plutonium-ka.
Hase ahaatee, FBI-du ma aysan u suurta galin inay Theodore Hall ka dhaadhiciyaan inuu wax qirto, sidoo kalena Saville Sax, ayaa su'aalo la weydiiyay, waxna ma uusan sheegin.
Ma jirin Seynisyahan kale oo ay magacaabeen labada jaajuus ee la qabtay. baaritaannadii lagu sameeyayna wax astaan ah ma aysan muujinin - waayo Hall aad uga uusan shaqeyn jirin wixii ka dambeeyay howlgalkii mashruuca Manhattan ee lagu sameeyay hubkii ugu horreeyay ee nuclear-ka.
''Waxaa la igu eedeeyay inaan baddalay jidkii ay ku socotay taariikhda", ayuu yiri Hall, sida uu tabiyay wargeyska New York Times.
"Laga yaabee inaan baddalay jihadii ay u socotay taariikhda, jihadaas oo haddii aanan baddalin sababi lahayd in dagaal loo adeegsado hubka atomic-ga uu dhaco intii lagu guda jiray 50-kii sano ee lasoo dhaafay - tusaale ahaan Bambada nuclear-ka waxaa lagu dhufan lahaa Shiinaha sanadkii 1949-kii ama horaantii 1950-meeyadii.
"Hagaag, haddii aan gacan ka geystay inaysan arrintaas dhicin, waan aqbalayaa dacwadda", ayuu yiri, isagoo si toos ah u caddeeyay inuu jaajuus u ahaa Ruushka, uuna siiyay xogta muhiimka ah.